दुनियाँको सबैभन्दा छोटी महिला 'ज्योति'को घरमा चोरी - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एजेन्सी । दुनियाँको सबैभन्दा छोटो कद भएकी महिला ज्योति आम्गेको घरमा चोरी भएको छ । मंगलबार राति भएको चोरीमा ९६ हजार रुपैयाको नगद एवम आभूषण चोरको हात लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रहरी अधिकृतका अनुसार आम्गेको नन्दनवन इलाकामा अवस्थित घरमा रातको १ बजे देखि तीन बजेको बीचमा चोरी भएको हो। आम्गे आफ्नो बुबाआमा सहित एक कार्यक्रमको लागि अमेरिका पुगेकी थिइन् ।
ज्योति सोहि रात डा. बाबासाहेब आंबेडकर अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्दै थिइन् । स्रोतले बताएअनुसार ज्योति को भाइ सतीश र सतीशको पत्नीले ताला लगाई उनलाई लिन विमानस्थल पुगेका थिए । यहि समय बीचमा चोरी भएको हुन् सक्ने प्रहरीको आशंका गरेको छ ।
स्मरण रहोस्. ज्योति आम्गेले बिग बोश-३ मा हिस्सा लिईसकेकी छिन् । नागपुरमा रहनेवाली २५ वर्षीय ज्योति( ६१.९५ सेमी अर्थात २४.७ इन्च)ले सन् २००९ देखि लगातार गिनिज बुक अफ द वोर्ल्ड रेकर्डमा छोटो कदको महिलाको नाम आफ्नो भागमा पार्दै आइरहेकी छिन ।